एयरपोर्ट भित्रैबाट लाईभ, ६ हजार मागेको गुनासो । रोल्पाबाट आई ढुङगा फुटाए तर पैसा पाएनन्! (भिडियो) « NBC KHABAR
एयरपोर्ट भित्रैबाट लाईभ, ६ हजार मागेको गुनासो । रोल्पाबाट आई ढुङगा फुटाए तर पैसा पाएनन्! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३३६ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विषयमा रिपोर्टहरु पनि प्रस्तुत गरिएको छ, साथै विभिन्न विषयमा विशेष व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
१. कामदारहरुले ढुंगा खानीमा काम गरेको पैसा पनि पाएनन्, भोक भोकै बस्न बाध्य !
काठमाडौं । रोजगारीका लागि रुकुमबाट काठमाडौं आएका ७ जना रोल्पालीहरुले आफूले काम गरेको पैसा नपाएपछि काठमाडौंमा भोक भोकै बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुले काभ्रे च्यासिखर्क बस्ने अमृत लामाको ढुंगा खानीमा ३५ दिन काम गरे ।
काभ्रेमै रहेको उक्त खानीमा खाना बस्न र सुत्ने व्यवस्था दिई हजार रुपैयाँ दिने भनेपछि उनीहरुले ढुंगा खानीमा काम गरे । भने जस्तो खाना बस्न व्यवस्था नभएपछि उनीहरुले ३५ दिन काम गरेर आफ्नो पारिश्रमिक मागे
२. तोकेको भन्दा बढी शुल्क उठाउने मेडिकल कजेललाई कसले कार्वाही गर्ने ?
पोखरा । पटक पटक बिवादमा पर्दै आएको पोखरामा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजका करीब ४०० विद्यार्थीले कलेजले मनोमानी ढंगले आर्थिक चलखेल र शुल्क उठाउँदै आएको विरोध गर्दै कलेजको विरुद्धमा आन्दोलन थालेका छन् । तालाबन्दीबाट सुुरु भएको विरोधको कार्यक्रम बिरोध ¥यालीमा परिणत भएको र आफ्ना माग सम्बोधन नभए हदैसम्मको विरोधमा उत्रने पनि विद्यार्थीले चेतावनी दिएका छन् ।
ठेक्का पाएको ८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुल बनेन, ठेकेदार वेपत्ता, प्रशासन मौन !
कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ ठेकीपुर र वडा नम्बर ५ लालबोझी र ७ चर्चालाई जोड्ने कान्द्रा नदीको पुलको सम्झौता भएको साढे सात बर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
अहिले निर्माण स्थलमा न काम भएको छ, न कोही कामदार छन् । ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनि लामा शेर्पा जेभी प्रा.लि.ले काम छाडेर फरार भएको छ । हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत ३ करोड ४५ लाख २० हजारको लागतमा बन्न लागेको एक सय मिटर लामो पुल निमार्णका लागि २ वर्षको समय सीमा तोकिएको थियो ।